Nandritra ny volana maromaro lasa izay, nanampy ny mpanjifan'ny Salesforce aho tamin'ny famolavolana paikady momba ny fampiasana tsara indrindra ireo sehatra manana fahazoan-dàlana. Fotoana mahaliana iray ary iray tena nahagaga ahy. Izaho dia efa mpiasan'ny ExactTarget tany am-boalohany, mpankafy marobe ny fahaiza-manao tsy manam-petra an'ny Salesforce sy ny vokatra rehetra misy ao aminy aho.
Ity fanararaotana ity dia tonga tamiko tamin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka Salesforce izay manana laza miavaka amin'ny fampiharana, fampandrosoana ary fampidirana ny fanangonana ireo sehatra Salesforce ho an'ny mpanjifany. Nandritra ny taona maro, nandroaka azy ireo hiala ny valan-javaboary izy ireo… saingy nanomboka nahatsikaritra banga iray tao amin'ny indostria nilaina nilaina izy ireo - tetika.
Ny fampiharana Salesforce dia tsy a Paikady marketing. Ny fampiharana Salesforce dia mety hidika na inona na inona - avy amin'ny fomba fivarotanao, ny olona amidinao, ny fifandraisanao amin'izy ireo, ny fomba fampidiranao amin'ireo sehatra orinasa hafa, ary koa ny fandrefesanao ny fahombiazanao. Tsy paikady ny fahazoana fahazoan-dàlana sy fandefasana logins any amin'ny Salesforce… toy ny fividianana boky playbook banga.
Raha nividy a ianao barotra tetika avy amin'ny consultant, inona no antenainao hatolotra azy ireo? Nametraka an'ity fanontaniana ity tamin'ny mpitondra aho manerana ny indostria ary ho gaga ianao amin'ny valinteny isan-karazany azoko… hatramin'ny idealy ka hatramin'ny famonoana azy farany.
Hita ve ny fikambanana amin'ny dingana tsirairay amin'ny fividianana - manomboka amin'ny famaritana olana, amin'ny fizahana vahaolana, hatramin'ny takiana ary ny fisafidianana fikambanana ara-bola, mety hahatratra ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpividy ve ny fikambanana? Nanana fitaovana sy loharanon-karena hanampiana ny fanamarinana ny voka-tsain'ny mpividy sy nanampy azy ireo hitarika ny fifampiraharahana ve izy ireo?
Azo tratrarina amin'ny alàlan'ny haino aman-jery tiana kokoa ve ny fikambanana? - Tsy ny lahatsoratra ihany no antonony. Raha ny marina dia misy olona tsy mandray fotoana hamakiana intsony. Mampiasa lahatsoratra, sary, raki-peo, ary horonan-tsary ve ny fikambanana mba hahatratrarany ny vinan'ny mpanjifa na ny toerana alehany kokoa?
Rehefa vita, ahoana no handrefesana ny fahombiazana amin'ny paikadim-barotrao? Alohan'ny hampidiranao paikady dia tsy maintsy dinihina ny fahaiza-mandrefy mba hahalalanao fa mandeha io. Hafiriana no hiandrasanao vao manapa-kevitra ny amin'ny fahombiazany? Amin'ny firy ianao no hanatsara ny fampielezan-kevitrao? Amin'ny firy ianao no aforeto izy ireo raha tsy miasa izy ireo?
Avy amin'ny ohatra fintech etsy ambony, mety ho hitan'ny orinasanao fa tsy manana calculatera findramam-bola any an-trano ity tranokala ity ka manana drafitra hananganana iray ianao. Tsy midika izany fa ny tetika dia mamaritra ny endrik'ilay kajy, ny fomba hampivelaranao azy, ny toerana hampiantranoana azy, na ny fomba hampiroboroboanao azy… izany rehetra izany dia ny dingana fanatanterahana ny fampielezan-kevitra azo atao ny lalana. Ny paikady dia ny fananganana kajy izay ilainao hahatratra ny mpanjifa. Ny fampiharana sy ny fanatanterahana dia avy eo.
Rehefa mifampidinika amina fikambanana maro kokoa miaraka amin'ny Salesforce aho dia mandondona azy ivelan'ny valan-javaboary amin'ireo fidirana an-tsehatra ireo. Salesforce dia nanampy ny mpanjifa hamantatra ny filàna vahaolana teknolojia hanampiana azy ireo amin'ny varotra sy ny ezak'izy ireo amin'ny varotra.